Efa noezahina naverina amin’ny laoniny avokoa ny fiainana manerana ny Nosy, hoy io Minisitra io. Tsy misy intsony ny tsy fahafahana mivezivezy amin’ny alina ankoatra ireo toerana ireo. Ho an’ny fitaterana manokana, ireo zotra rejionaly, dia tsy misy olana toa an’Antsirabe mankany Ambositra ohatra, izay tsy mila fangatahana fahazoan-dàlana. Ilaina ary tsy maintsy manana fahazoan-dàlana kosa ny mivoaka sy miditra amin’ireo distrika 4 sy ny faritra Analamanga. Mbola ao anaty fahamehana isika, ka ireo kilasy hanala fanadinana ihany no mianatra manerana ny Nosy, raha ny fanazavany